Cidkale Ayaa Doonaya Qalab Lagu Diyaarsho Cool Customer-Cray - Ellicott Dredges
Kuwo Kale Ayaa Ubaahan Cool Customer-Dhisan Kala Duwan?
Dadka daggan degmada Barnstable, Massachusetts waxay si dulqaad leh u sugayeen kuwa cusub ee la qariyey Ciidda Shifter Dredge inuu yimaado. Hagaag sugitaankoodii ayaa ugu dambeyntii dhammaaday. Nooca cusub ee $ 2 milyan oo doolar oo ay dhistay Ellicott Dredges ee Maryland ayaa leh ugu dambayntii waxay gaadhay Falmouth Harbor. Qof walba runti wuu ku faraxsan yahay mashruuca. Xaqiiqdii, mas'uuliyiinta dekeddu waxay diyaar u yihiin inay shacbiyadooda u soo bandhigaan shaashadda cusub ee biyaha ku habboon.
The Ciidda Shifter si loo maro Hal Imtixaan oo Dhamaaday
Koox wakiillo ah oo ka socda Ellicott Dredges ayaa sameynaya tijaabooyin hordhac ah toddobaadkan. Kooxdayadu waxay shaqeynayaan habeen iyo maalinba si ay u hubiyaan in wax waliba si hagaagsan u socdaan ka hor intaan la wareegin gacan ku haynta mas'uuliyiinta gobolka.
“Iyaga (Ellicott) waxay ahaayeen kuwo cabsi badan oo ay la shaqeeyaan,” ayuu yiri Kaaliyaha Ku-meel-gaarka ah ee Maamulka Gobolka Stephen Tebo, mar uu la hadlayey suxufiyiinta usbuucii la soo dhaafay. Tebo, wuxuu sharraxay faahfaahinta isku dhafan ee shaqada ku lug leh markii la dhisayay qashin-caado-u-gaar ah. The Ciidda Shifter waa mid ka mid ah markab nooc ah oo u baahan feejignaan aad u weyn oo tafaasiil leh.
Waa maxay sababta Ciidda Shifter si ba'an ayaa loogu baahan yahay
Falmouth Harbor waxaa lagu dhisay 1907,markii marinka lagu jarjaray xeebta xayndaabka si loo kala saaro balliga macaan ee Deacon's balliga iyo Nantucket Sound. Harbor Falmouth waa goob ku habboon kalluumeysiga kalluumeysatada caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay dekedda waxaa la isticmaalaa sanadka oo dhan, guddoomiyeyaasha degmooyinku waxay u codeeyeen in la dhiso qoddobo labaad oo ay ku lammaanaan karaan Codfish. The Codfish, waa duqii hore ee Ellicott 670 Dragon dredge. Ilaa dhowaan waxay ahayd meesha kaliya ee loo isticmaalo in lagu ilaaliyo Harbor Falmouth.
Qodista labaad ayaa si ba'an loogu baahan yahay sababtoo ah xaddiga shaqada ee sanadka oo dhan dhaca. Si kastaba ha noqotee, mashaariicda qaar ayaa dib u dhac ku imaan kara mararka qaarkood taasoo keeneysa in shaqo la kaydiyo. Qorshayaasha bilowga ah waxaa ka mid ah isticmaalka labadaba Ciidda Shifter iyo Codfish si loo ilaaliyo Harbor Falmouth. Waqtigaan la joogo, qod kasta waxaa loo taagi doonaa labada dhinac ee dekedda, Taasi waa ilaa ganacsigu sii kordho, oo ay mashaariicdu bilaabaan inay is tuulaan,
The Ciidda Shifter waxay arki doontaa ficilkeedii ugu horreeyay wax ka yar laba toddobaad. Dood-wadaag ayaa udub-dhexaad u ahaa adeegsiga markabka si looga caawiyo nadiifinta wabiga Eel ee ku dhow aagga Cape Cod.
Xaaladda Farsamada Farshaxanka
Stephen Bradbury, oo ah kabtanka kooxda Ciidda Shifter, ayaa u sacab tumay astaamaha cusub ee loo yaqaan 'dredge' iyo tikniyoolajiyad casri ah intii ay socotada ku dhex socdeen markabka wariyeyaasha. "Waa naqshad gebi ahaanba cusub," ayuu yidhi isaga oo isbarbar dhigaya kii ka horreeyay, Kalluunka loo yaqaan 'Codfish'.
The Ciidda Shifter wuxuu leeyahay waxtarka shidaalka. Intaas waxaa sii dheer, markabku wuxuu ku ridi karaa jiingad masaafo aad u fog Dredge ayaa sidoo kale qodaya qoto dheer oo ballaaran, taas oo u oggolaanaysa inay si dhakhso leh u dhammayso mashaariicda, ayuu yiri Bradbury.